Sat, Jul 11, 2020 at 12:58pm
नेपालगन्जको मेयरमा डा. धवल र उपमेयरमा उमा थापा बिजयी
नेपालगन्ज, असार २० गते । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा राप्रपाका महामन्त्री डा. धवल शम्शेर राणा बिजयी भएका छन् । मंगलबार बिहान सार्वजनिक अन्तिम परिणाम अनुसार राणा १२ हजार ५१५ मत प्राप्त गरि प्रमुखमा बिजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिष्पर्धी नेपाली काँग्रेसका डा. सुरेश कनोडियाले ८ हजार ७३० , नेकपा माओवादी केन्द्रका दामोदर आचार्यको ७ हजार १९८ , एमालेका सम्सुद्दिन सिद्दिकीको..
नेपालगन्ज, असार १९ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा राप्रपाका उम्मेदवार डा. धवल शम्शेर राणा विजयी भएका छन् । यसैगरी उपमेयरमा नेपाली काँग्रेसका उमा थापा मगर बिजयी भएका छन् । अन्तिम गणना सम्पन्न भएपनि बिजयी राणा र थापाले गणनास्थल भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा हात मिलाका थिए । आधिकारिक मत बिवरणसहित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बिजयी मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्षहरुको औपचारिक घोषणा गर्नेछ । नेपालगन्जका..
बैजनाथमा एमाले बिजयी
बाँके, असार १९ । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा नेकपा एमाले बिजयी भएको छ । प्रमुखमा एमालेका मानबहादुर रुचाल ९ हजार ७७२ मत र उपप्रमुख शारदा विक ९ हजार ७३८ मत प्राप्त गरि बिजयी हुनुभयो । काँग्रेसका देबहादुर खत्रीले ६ हजार ५५० र भावना चौधरीले ७ हजार ३६६ मत पाउनुभयो । माओवादी केन्द्रका राजमोहन चौधरीले ५ हजार ३६३ र उपप्रमुख जानकी विकले..
बैजनाथ गाउँपालिकामा एमाले विजयी हुने निश्चित
नेपालगन्ज, असार १९ । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा नेकपा एमाले विजयी हुने निश्चित भएको छ । मतगणना अन्तिमचरणमा पुगेकोे छ । एकघण्टाभित्र मतगणना सकेर परिणाम घोषणा गर्ने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको तयारी । जम्मा गणना बाँकी रहेको मत भन्दा एमालेका उम्मेदवारहरुको अग्रता बढि भएका कारण बिजयी भएको भन्दै एमाले कार्यकर्ता उत्साहित भएका छन् । प्रमुखमा एमालेका मानबहादुर रुचालको आठ हजार ४०६ , उपप्रमुख..
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा धवल र उमा निश्चित
नेपालगन्जका २३ वडा मध्ये अब १३,१४,१५ र १ट नम्बर वडाको गणना सुरु हुदैछ । थोरे मतदाता रहेका वडा छन् । अहिलेको मतान्तरले मेयरमा धवल शम्शेर र उपमेयरमा काँग्रेसका उमा थापा बिजयी हुने निश्चित जस्तै भएकोे छ । राप्रपा डा. धवल शम्शेर राणा ११००८ र रमारानी बैश्य ७६५९ काँग्रेस डा. सुरेश कनोडिया ७१३२ र उमा थापा ९०७४ एमाले सम्सुद्दिन सिद्दिकी ६२७७ र शान्ति ढकाल..
बाँकेको पछिल्लो मतगणनाको अवस्था
आईतवार, आषाढ १८, २०७४ साल
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका राप्रपा ६५०७ र ४८२९ काँग्रेस ३९०८ र ४९४५ माओवादी ३६३५ र ३४०६ एमाले ३११६ र ३३६५ पmोरम २२५८ र ६८५ कोहलपुर नगरपालिकामा एमाले २९२९ र ३१२२ काँग्रेस २८५१ र ३१२६ माओवादी २२९६ र १९९१ खजुरा गाउँपालिका एमाले ४१९९ र ४१५५ माओवादी २९०३ र २४८६ काँग्रेस १११३ र १४१८ बैजनाथ गाउँपालिका एमाले ५७९८ र ५७२६ काँग्रेस ४२४८ र ४८२८ माओवादी २३७५ र १७३७ जानकी गाउँपालिका माओवादी १४०८ र ११७९ फोरम १०४५ र १०३२ एमाले ९८१ र ११२० काँग्रेस ९१४ र..
राप्ती सोनारीमा काँग्रेस बिजयी, कोहलपुरमा एमाले अगाडी
नेपालगन्ज, असार १८ । बाँकेको राप्ती–सोनारी गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेस विजयी भएको छ । प्रमुखमा नेपाली काँग्रेसका लाहुरराम थारुले ८ हजार २३६ र उपप्रमुखमा धनीकुमारी खत्रीले ८ हजार २०३ मत प्राप्त गरी विजय भएका हुन् । प्रतिष्पर्धी प्रमुखमा एमालेका तुलसीराम थारुले ६ हजार ९०० र माओवादीका पट्टु थारुले ६ हजार ७०० मत पए । यसैगरी उपप्रमुखमा एमालेका चमेली बागबलले ६ हजार..
खजुरामा एमालेको अग्रता कायमै
एमाले ४१९९ र ४१५५ माओवादी २९०३ र २४८६ काँग्रेस १११३ र १४१८ ..
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा राप्रपा र कोहलपुरमा काँग्रेसको अग्रता कायमै
राप्रपा ६५०७ र ४८२९ काँग्रेस ३९०८ र ४९४५ माओवादी ३६३५ र ३४०६ एमाले ३११६ र ३३६५ पmोरम २२५८ र ६८५ कोहलपुर नगरपालिका काँग्रेस २७०५ र २८९९ एमाले २५४३ र २७१८ मओवादी २०२५ र १७१९ ..
डुडुवामा काँग्रेस बिजयी
शनिबार, आषाढ १७, २०७४ साल
डुडुवामा काँग्रेस बिजयी नेपालगन्ज । बाँकेको डुुडुवा गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेस विजयी भएको छ । प्रमुखमा काँग्रेसका नरेन्द्र चौधरी र उपप्रमुखमा सायदा बानो बिजयी हुनुभएको हो । चौधरीले चार हजार ६९१ र बानोले चारहजार ३१५ मत प्राप्त गरि बिजयी हुनुभएको हो । उहाँका निकटतम प्रतिष्पर्धी फोरम नेपालका प्रमुखमा बिजय यादवले चार हजार १९२ र उपप्रमुख जविदा खातुनले चार हजार ११४ मत पाउनुभयो..
यस्तो छ बाँकेको पछिल्लो मतगणनाको अवस्था
नेपालगन्ज प्रमुख र उपप्रमुख राप्रपा ४३१७ र ३२०० एमाले २१४६ र २३९८ नेका २५०५ र ३४५७ माके २१९९ र १९१२ कोहलपुर नपा प्रमुख र उपप्रमुख काँग्रेस २१०० र २१२३ एमाले १९९१ र २१४६ माओवादी १५८२ र १३६० बैजनाथ गाउपालिका प्रमुख उपप्रमुख एमाले ३६५८ र ३६२१ नेका २२६० र २५९९ माओवादी ११५९ र ७५९ जानकी गाउपालिका प्रमुख उपप्रमुख माके ७४३ र ६९७ फोरम नेपाल ५८१ र ६३३ राप्रपा ५४२ र ५५० एमाले ४५२ र ५४५ काँग्रेस ४५० र ४०४ खजुरा..
बाँकेका ८१ मध्ये २३ वडाको परिणाम
काँग्रेस ९ वडामा विजयी नेपालगन्ज २ सुनिलसिंह हमाल कोहलपुर १५ पतिराम थारुको प्यानल नरैनापुर ३ र ५ नरैनापुर ६ मा युवराज मोर्य राप्तीसोनारी १ चन्द्रबहादु ओली राप्तीसोनारी ३ गंगाराम चौधरी राप्तीसोनारी ८ खुम वहादुर वस्नेत राप्तीसोनारी ९ महाविर वली एमाले ६ वडामा विजयी कोहलपुर १ गोपी खनाल खजुरा १ सुमन मल्ल नेपालगन्ज १ प्रमोद रिजाल बैजनाथ १ रुपबहादुर मल्ल डुडुवाका ५ परसुशुराम बुढाथोकी राप्तीसोनारी ं २ मदन वली संघीय समाजवादी फोरम १ गाँउपालीका र ५ वडामा..
बाँकेको पछिल्लो मतपरिणाम
नरैनापुर गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा संघीय समाजवादी फोरम बिजयी नेपालगन्ज प्रमुख र उपप्रमुख राप्रपा ३१४२ र २१५२ एमाले १५४२ र १७५८ नेका १९०२ र २३४२ माके १६७० र १५०६ कोहलपुर नपा प्रमुख र उपप्रमुख काँग्रेस १३१४ र १३९९ एमाले ९७८ र १११३ मओवादी ९१० र ७९७ बैजनाथ गाउपालिका प्रमुख उपप्रमुख एमाले ३४४२ र ३४५५ नेका १९७२ र २४७७ जानकी गाउपालिका प्रमुख उपप्रमुख माके ६५० र ५४२ फोरम नेपाल ५६४ र ६१९ राप्रपा ५३२ र ५३० काँग्रेस ४२०..
नरैनापुरमा संघीय फोरम विजयी
शुक्रबार, आषाढ १६, २०७४ साल
नेपालगन्ज, असार १६ । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा संघीय समाजवादी फोरम विजयी भएको छ । प्रमुखमा फोरमका ईस्तियाक अहमद साह चार हजार ८० मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो । उहाँका प्रतिष्पर्धी नेपाली काँग्रेसका रामचन्द्र मौर्यले तीन हजार ३८८ मत पाउनुभयो । उपप्रमुखमा फोरमका जयन्तिदवी श्रीवास्तवले तीन हजार ४४ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो । उहाँका प्रतिष्पर्धी काँग्रेसका अतिकुन निशाले दुईहजार ५९८..
नेपालगन्जको पछिल्लो मत परिणाम
नेपालगन्ज प्रमुख र उपप्रमुख राप्रपा १८७२ र १२१२ नेका ९७९ र १४८५ माके ९५८ र ७५८ कोहलपुर नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख काँग्रेस ११०५ र ११६५ एमाले ७६१ र ८३३ माओवादी ५८८ र ५४४ फोरम लोकतान्त्रिक ६२१ र ५२४ बैजनाथ गाउपालिका प्रमुख उपप्रमुख एमाले १२१७ र १२१२ नेका ८९० र ८९६ माके २२२ र २१०० वडा नम्बर १ मा एमालेकोे प्यानल वियी जानकी गाउपालिका प्रमुख उपप्रमुख राप्रपा ४१२ र ३१३ फो नेपाल ३९५ र ३५७ काँग्रेस २७१ र..
एमालेमय वडा नम्बर १
नेपालगन्ज, असार १६ । बाँकेकोे स्थानीय तहमा वडा नम्बर १ एमालेमय भएकोे छ । बाँकेको खजुरा १ मा एमालेका सुमन मल्ल, नेपालगन्न्ज ११ मा प्रमोद रिजाल, कोेहलपुर १ मा गोपी खनल र बैजनााथ १ मा एमालेका रुपबहादुर मल्ल वडा अध्यक्षमा विजयी भएका छन् । डुडुवा १ र राप्तीसोनारी १ मा काँग्रेस र नरैनापुर १ मा भने फोरमका नेपालका उम्मेदवार विजयी भएका ..
यस्तो छ जानकी गाउँपालिकाको पछिल्लो मत परिणाम
नेपालगन्जमा १ र २ को मतगणनामा मेयर र उपमेयरमा कसले कती मत पाए ।
नेपालगन्ज प्रमुख र उपप्रमुख राप्रपा १५७४ र ९३५ एमााले ६५४ र ८६४ नेका ८२७ र १३०७ माके ७०१ र ५२५ वडा नम्बर १ मा एमालेका प्रमोद रिजाल वडा अध्यक्षममा विजयी । सदस्यमा एमालेका ३ र १ काँग्रेस विजयी । वडा नम्बर २ मा काँग्रेसका सुनिल हमाल विजयी । सदस्यमा काँँग्रेस र राप्रपा २।२ कोहलपुर नपा प्रमुख र उपप्रमुख कोहलपुरमा एमाले ४३८, काँग्रेस ४०७, माके ३९४ वडा १ मा..
नेपालगन्ज, असार १६ । बाँकेका ८ स्थानीय तह मध्ये चारमा नेकपा एमालेले अग्रता लिएको छ । एमाले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा अग्रस्थानमा रहेको छ । यसैगरी काँग्रेसले २, संघीय समाजवादी फोरम र राप्रपाले १÷१ तहमा अग्रता लिएका छन् । नेकपा एमालेले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका , खजुरा गाउँपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकामा अग्रता लिएको छ । काँग्रेसले डुडुवा र राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा अग्रता लिएको छ..
कोहलपुरबाट एमालेको बिजयी सुरुवात
बिहिवार, आषाढ १५, २०७४ साल
नेपालगन्ज असार १५ । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका १ मा एमालेको प्यानल नै विजयी भएको छ । बाँकेमा पहिलो पटक एमालेले कोहलपुरबाट खाता खोलेको छ । वडा अध्यक्षमा एमालेका गोपी खनाल नेतृत्वको पुरै प्यानल विजयी भएको छ । बाँकेमा ८१ वडा मध्ये परिणाम घोषणामा कोहलपुरबाट एमालेको बिजयी सुरुवात भएको छ ।..
बाँकेको मतगणनाको पछिल्लो अवस्था यस्तो छ
नेपालगन्ज, असार १५ गते । स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना अनुसार बाँकेमा त्रिपक्षीय प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तह मध्ये नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासहित ३ वटा तहमा नेकपा एमालेले अग्रता लिएको छ । एमालेले खजुरा र बैजनाथ गाउँपालिकामा अग्रता लिएको छ । यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसले कोहलपुर नगरपालिका र राप्तीसोनारी र डुडुवा गाउँपालिकामा अग्रता लिएको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालले नरैनापुर..
नरैनापुर र डुडुवामा फोरमको अग्रता
नेपालगन्ज, असार १५ । मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भएका बाँकेका दुईवटै स्थानीय तहमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालले अग्रता लिएको छ । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा संघीय समाजवादी फोरम नेपालेले अग्रता लिएको छ । करिब ३०० मत गणना हुदा प्रमुखमा फोरमले १३२, एमालेले ५८, नेपाली काँग्रेसले ३८, नेकपा माओवादी केन्द्रले २९, राप्रपाले ६ र लोकतान्त्रिक फोरमले ३ मत प्राप्त गरेका निर्वाचन अधिकृत..
कोहलपुर बाहेक सात स्थानीय तहमा मतगणना
नेपालगन्ज, असार १५ । बाँकेको ७ वटा स्थानीय तहमा मतगणना सुरु भएको छ । कोहलपुर नगरपालिका बाहेकका सबै स्थानीय तहमा मतगणना कार्य सुरु भएको हो । कोहलपुरमा १ बजेपछि मतगणना गर्ने सहमती भएको छ । बाँकेका ८ वटा स्थानीय तहमध्ये डुडुवा गाउँपालिकाको रातीदेखि नै मतदान जारी छ । डुडुवामा वडा नम्बर १ होलियाको करिब ६०० मत गणना हुँदा फोरम नेपालका..
बाँकेमा मतगणना सुरु
नेपालगन्ज, असार १५ गते । बुधबार सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको बाँकेका अधिकाँश स्थानमा अब केही समयपछि मतगणना सुरु हुदैछ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक बसि बिहानदेखि मतगणना गर्ने निर्णय गरेको हो । डुडुवा गाउँपालिकामा भने मतगणना रातीदेखि नै सुरु भएको छ । ११५ मत गणना हुँदा फोरम नेपालका उम्मेदवार विजयी यादवले ४४ र नेपाली काँग्रेसका पप्पु चौधरीले ३३ मत..
बाँकेमा ७० प्रतिशत बढि मतदान
बुधबार, आषाढ १४, २०७४ साल
नेपालगन्ज, असार १४ । स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत बुधबार भएको मतदानमा बाँकेमा ७० प्रतिशत भन्दा बढि मतदान भएको छ । बाँकेका मुख्य निर्वाचन अधिकृत तेजनारायण पौडेलका अनुसार मतपेटिकाहरु निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आईसकेपछि मात्रै मतगणनाको टुंगो लाग्ने छ । करिब ७२ प्रतिशत मतदान भएको अनुमान गर्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृत पौडेलले सबै मतपेटिका प्राप्त भईसकेपछि मात्रै एकिन बिवरण थाह हुने बताए ।..
शान्तिपुर्णरुपमा मतदान सुरु
नेपालगन्ज,, असार १४ । स्थानीय तहकको निर्वाचनमाा बाँकेमा मतदाताहरुको उत्त्साह देखिएको छ । बिहान ७ बजेदेखि मतदान सुरु भएको छ । मतदाताहरु एकाबिहानैदेखि लामबद्ध भएका छन्् । बाँकेमा ८ वटा स्थानीयतहमा २ लाख ४६ हजार १०४ मतदाता रहेका छन् । सुरक्षाका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी म्यादी प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राअ परिचालन गरिएको छ । बेलुका मतदान सकिएपछि मतगणना बारे..
नेपालगन्जमा निर्वाचनमय ईद
सोमबार, आषाढ १२, २०७४ साल
नेपालगन्ज, असार १२ । नेपालगन्जको ईदगाहमा सोमबार ईदको नमाज पढ्नका लागि हजारौं मुस्लिम समुदाय जम्मा भएका थिए । मुस्लिम समुदाय ईदको नमाज पढिरहदा बाहिर भने उम्मेदवारहरु शुभकामना साटासाटमा व्यस्त भएका थिए । नेपालगन्जको इदगाहमा विहान इदको नमाजका लागि जम्मा भएका हजारौं मुस्लिमहरुलाई गैर मुस्लिम समुदायले इदको शुभकामना आदानप्रदान गरे । ईदगाहमा मुस्लिम समुदायलाई ईदको शुभकामना दिनका लागि अधिकाँश राजनीतिक दलबाट नेपालगन्ज उपमहानगररपालिकामा..
नेपालगन्जमा एमालेको पक्षमा उर्लियो जनसागर
आईतवार, आषाढ ११, २०७४ साल
नेपालगन्ज, असार ११ । मौन अवधी सुरु हुनुभन्दा केही घण्टा अगाडी नेकपा एमालेले नेपालगन्जमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयबाट अपरान्ह सुरु भएको हजारौं सहभागी रहेको र्याली नगरका बिभिन्न भागको परिक्रमा गरी पुष्पलाल चौकमा पुगेको थियो । एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार सम्सुद्दिन सिद्दिकी, उपमेयरका उम्मेदवार शान्ति ढकालसहित एमालेका केन्द्रीय सदस्य मो. हारुन, केन्द्रीय सल्लाहकार देबराज भार, जिल्ला अध्यक्ष..
कसले जित्ला बाँकेका ८ स्थानीय तहमा
बाँके, असार ११ – बाँकेका ८ वटा स्थानीय तहमध्ये सबैको ध्यान नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा रहेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको मेयरका लागि १६ जना र उपमेयरका लागि १० जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । मेयरमा एमालेका सम्सुद्दिन सिद्दिकी, काँग्रेसका डा. सुरेश कनोडिया, माओवादी केन्द्रका दामोदर आचार्य, राप्रपाका डा. धवलशम्शेर राणा, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका कमरुद्दिन राई लगायतको उम्मेदवारी परेको छ । मेयरमा..
Results 1048: You are at page 25 of 35